पू’रुषले मन पराउछन् यस्ता यु’वती ! मोटी पाउनु सौ’भाग्य… – Jagaran Nepal
पू’रुषले मन पराउछन् यस्ता यु’वती ! मोटी पाउनु सौ’भाग्य…
सामान्यतया स्लिम केटीहरु आ’र्कषक हुने मान्यता रहँदै आएको छ । तर अहिले एक अनु’सन्धानले यो कुरालाई गलत बताएको छ । अनुसन्धानमा के खुल्यो भने अधि’कांश पु’रुषहरु मोटी महिला मन पराउँछन् । यसका कारणहरु पनि धेरै रहेका छन जसमा सबैभन्दा पहिलो कारण मोटी केटीहरु श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन र हरेक समयमा साथ दिन्छन भन्नुको अ’र्थ सजिलैं छाडेर जाँदैनन् ।
नेशनल अटोनान्मस यू’निवर्सिटी अफ मे’क्सिकोंले गरेको अ’ध्यनमा स्लिम केटीहरुको दाँजोमा मोटी केटीहरुसँग स’म्बन्धमा रहेका पु’रुषहरु धेरै खुःशी हुन्छन् । अ’ध्यनमा भनिएको छ कि स्लिम केटीहरुको तुलनामा मोटी केटीसँग वि’वाह गर्ने पु’रुष १० गुणा धेरै खुःशी रहन सक्छ । यस्ता महिलाहरु पु’रुषलाई सिक्स प्याक लगायतका शा’ररीक रुपमा तनाब हुने खालका कामहरु गर्न दबाब दिदैंनन तर स्लिम केटीहरु यस्ता कुराहरुमा दबाब दिन्छन् ।
अर्को कुरा जो महिला मोटी छिन उनलाई मिठो खाना पकाउन आउँने झण्डै ९९ प्र’तिशत स’म्भावना हुन्छ । यसरी खानेकुरामा पनि उनले श्रीमानको मन जित्न सक्छिन । अन्य कामहरुमा केही अल्छी गर्ने भए पनि खानेकुरामा मोटा मानिसहरु अ’ल्छी गर्न सक्दैनन् । अध्यन यो पनि भन्छ मोटी महिलासँग स’म्बन्धमा भएको केटा मानसिक रुपमा कहिल्लै तनाव नलिने प्र’कृतिको हुन्छ ।
यर्सथ मोटी महिलाहरु श्रृं’गार देखि लिएर अन्य विविध कुराहरुमा केटालाई दुःख दिने स्व’भावका हुँदैनन् । एउटा सत्य के हो भने जो मानिस मानसिक रुपमा ठिक हुँदैन उ नै धेरै दुब्लो पातलो हुन्छ । मोटी महिलाहरु कुनै पनि कुरा मनमा राखेर ष’डयन्त्र गर्ने खालका हुँदैनन । उनीहरु मनमा भएको कुरालाई त’त्काल भन्छन तर पछि सम्म राखेर बदला लिने स्व’भावका हुँदैनन् ।
यसरी दा’म्पत्य जीवन खुःशी र सफल हुन्छ उनिहरुले स’न्तानलाई पनि यसरी नैं प्रेम गर्छन अनी परिवारलाई पनि । यहाँ गरिएका कुराहरुमा हामीले केही परिमार्जन गरेका हौं तर दावा गरेका होईनौं । यो नितान्त अध्यनले देखाएको कुरा हो त्यसैले तपाईको प्रेम स’म्बन्ध राम्रो बनाउन्को लागि एक अर्कालाई बुझ्ने क्ष’मताको विकास गर्नुहोस् । यति भएको खण्डमा झण्डै सबै स’म्बन्धहरु दिगो र टिकाउ हुन्छन् ।
मोटी केटी पाउनुलाई सौ’भाग्य संसारमा विभिन्न किसिमका चकित पार्ने र रमाईलो गतिविधिहरु भईरहन्छन् । यि यस्ता घट्नाहरु खासै बि’स्वास नलाग्ने भएर सबैले वि’स्वास गर्दैन् तर घट्ना सत्य हो । सबै ‘पुरुषहरुले आफ्नो श्रीमती वा गल’फ्रेन्ड चिटिक्क जिउडाल सिलिम भएका राम्री खोज्छन् । पु’रुषहरु श्रीमती वा गल’फ्रेन्ड मोटाघाटा भएमा त्यति उपयोगि मान्दैन् ।
तर अ’फ्रिकाको उत्तर पश्चिमी मुलुक मा’र्टेनियामा यस्ता प’रिभाषा छन् । वि’वाहका लागि मोटी केटी पाउनुलाई सौ’भाग्यको रुपमा लिन्छन् । उनीहरुको चालचलन प’रम्परा अनुसार मोटी यु’वतीसगँ विवाह ब’न्धनमा बाध्यौ भने विवाह पछि स’म्पन्नता ल्याउने वि’स्वास गर्दछन् त्यसैले विवाहका लागी मोटी केटीलाई बदी प्रा’थमिकता दिन्छन् । र म’हिला मोटो हुनुले उनीहरु स’म्पन्न खानदानमा गनिन्छ ।
यो मान्यताले लोकप्रियता पाएको मा’र्टेनियामा वि’वाहका लागि पनि केवल मोटी केटीलाई नै मन पराईन्छ । यसक्रममा म’हिलालाई १६ हजार क्यालोरी खुवाइन्छ । नमानेमा कुटेर भए पनि खुवाइन्छ । यहाँ महिला जति धेरै मोटी हुन्छन्, त्यति नै सुन्दर मानिन्छ । एघारौं शताब्दिेखि सुरु भएको यो मान्यता अहिले पनि कायम छ । एजेन्सी